बलात्कारी जोगाउन सांसदको घरमा छलफल ! - Everest Dainik - News from Nepal
बलात्कारी जोगाउन सांसदको घरमा छलफल !
रौतहट, भदौ २८ । बालिका बलात्कार घटना ढाकछोप गर्न एक नम्बर प्रदेश सभा सांसदले आफ्नै घरमा छलफल (पञ्चायती) राखेको खुलासा भएको छ । पीडितलाई प्रहरीकहाँ आउन नदिइ घटनाको ४ दिनसम्म गाउँमै मिलाउने प्रयास गरिएको थियो ।
पीडितले इलाका प्रहरी गरुडामा किटानी जाहेरी दिएपछि सांसदले घटना लुकाउन खोजेको खुलेको हो । रौतहटको गम्हरियाकी १२ बर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय ५० बर्षीय सहमद अन्सारीलाई पक्राउ गरेको छ । भदौ २० गते घरमा कोही नभएको बेला अन्सारीले बलात्कार गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस मुख्यमन्त्री राईको संसदमा पहिलो सम्बोधन- प्रदेशको राजधानी र नामकरण छिट्टै हुन्छ
घटनापछि प्रदेशसभा सांसद अब्दुल कलाम आजाद (फूलबाबु)ले घरमा पीडकलाई समेत झिकाएर पञ्चायती गरे । बालिकाकी आमाले भनिन्, हामीसित पनि बयान लिने काम भयो । पछि सुनें, पैसा दिने निर्णय भएछ । अस्वीकार गरेर प्रहरीसमक्ष न्यायका लागि आयौं । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Province 1, Rape, पञ्चायती